Gudiga doorashada Jubbaland oo sadax maalin dib u dhigay doorashada -News and information about Somalia
Home Warkii Gudiga doorashada Jubbaland oo sadax maalin dib u dhigay doorashada
Gudiga madax banaan ee doorashada Jubbaland ayaa iyaga oo tixgalinaya codsiyada isdabajooga ee uga yimid beesha caalamka waxa ay dib u dhigeen xiliga la qabanayo doorashada madaxweynaha Jubbaland.
Xiliga doorashada oo horay loo iclaamiyay in la qabanaayo maalint isniinta ee bisha Agoosto ku beegan tahay 19ka ayaa waxaa lagu daray sadax maalin.
Gudiga ayaa qoraal ay caawa soo Saareen ku sheegay in doorashada madaxweynaha dhacayso maalinta khamiista ee bisha Agoosto tahay 22ka.
Wali lama oga in musharaxiinta mucaaradka ku ah geedi socodka doorashada Jubbaland ay ka faa’iidaysan doonaan sadaxda cesho ee dheeraadka ah ee la siiyay.
Previous articleSiyaasi ku eedeeyay Dowlada federaalka in Khilaaf iyo kala qeybin ku wado Galmudug
Next articleTop News:-Gabadhii Muqdisho lagu dilay maanta iyo waxa ay ka ahayd
Jabuuti oo soo faragelisay Khilaafka DF & Axmed Madoobe & Qorshe...
Kheyre oo qaabilay Wafdi ka socda QM